ထိုင်းစိုက်ပျိုးရာသီ အတွင်း လယ်သမားများသို့ ဘတ် ၃၄ ဒသမ ၅ ဘီလီယံ ကူညီထောက်ပံ့မှုပေးမည် - Yangon Media Group
ဘန်ကောက်၊ ဇူလိုင် ၁၂
နိုဝင်ဘာလတွင် စတင်သော ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ခုနှစ် သီးနှံရာသီတွင် ဘတ် ၃၄ ဒသမ ၅ ဘီလီယံထောက် ပံ့ကူညီမှုများပေးရန် ထိုင်းအမျိုးသား ဆန်စပါးမူဝါဒရေးရာနှင့် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကော်မတီက ဇူလိုင် ၁၂ ရက်တွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်လိုက်သည်ဟု ဇူလိုင် ၁၂ ရက်သတင်းများအရ သိရှိရသည်။
ဆန်စပါးမူဝါဒသတ်မှတ်ရာတွင် အမတော်ကြေးထုတ်ပေးခြင်း၊ ရိတ်သိမ်းချိန်အလေအလွင့်နည်း စေရန် နည်းပညာအကူအညီပေး ခြင်းနှင့် ဈေးနှိမ်မခံရစေရန် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဟူသော လုပ်ငန်းသုံးမျိုးရှိသည်။ လုံခြုံရေးမတည်ငြိမ် သောနိုင်ငံတော်ပိုင်းများမှလွဲ၍ နိုင်ငံတစ်ဝန်းမြန်ဆန်စွာဆောင်ရွက် ပေးနေပြီးဖြစ်သည်။ သို့သော် ယင်း တောင်ပိုင်းပြည်နယ်များတွင်လည်း ၂ဝ၁၉ ခုနှစ် ဇွန်၊ ဇူလိုင် ရာသီအမီဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
ယင်းမူဝါဒစီမံချက်များအတွက် ဘတ် ၂၂ ဘီလီယံသုံးစွဲလျာထား သတ်မှတ်ထားပြီးလည်း ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဆန်စပါးသိုလှောင်ထားသူများထဲမှာ စာရင်းကိန်းဂဏန်းအမှန်များ အချိန်မီမရရှိသေး၍ ဆောင်ရွက်မှုများနှောင့်နှေးနေခဲ့ရသည်ဟု ကုန်သွယ်ရေးဌာနအမြဲတမ်းအတွင်းဝန် Nuntawan Sakunt anaga က ထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်သည်။ စိုက်ပျိုးရေးဌာနအနေနှင့် ကောက်ညှင်းဆန် တန် ၁ဝ၂ဝဝ၊ ဆန်ဖြူ ၇၅ဝဝ တန်နှင့် ပထုန်သာနီဆန်မွှေးတန် ၈၉ဝဝ တို့အတွက် အစိုးရထံ ရောင်းချပါက ဘတ်ငွေ ၁၁၈ဝဝ စုစုပေါင်းဝင်ငွေရရှိမည် ဖြစ်သည်။ သို့သော်အကျိုးအကြေနှင့် ဖွဲကင်း သောစံချိန်မီဆန်များဖြစ်ရမည်ဟု ဆက်လက်ပြောကြားလိုက်သည်။
၁၉၈၂ မှစပြီး ကမ္ဘာ့ဖလား ဗိုလ်လုပွဲများတွင် ဘိုင်ယန်နှင့် အင်တာ ကစားသမားများ အမြဲပါဝင်
ဆော်ဒီ၊ ရုရှားတို့ကို ဖြတ်ကျော်ပြီး ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ရေနံထုတ်လုပ်သူနေရာကို အမေရိကန် ဆက်ခံမည
နိုင်ငံနာမည်ပြောင်းလဲရေး မက်စီဒိုးနီးယားတွင် လွှတ်တော် အမတ်များ မဲပေး
“ပရိသတ်တွေ ကိုယ့်ကို သတိထားမိစေမယ့် ကာရိုက်တာ ဆန်းဆန်းလေးတွေ ပိုရိုက်ချင်တယ်” အ လ င်းေ ရာ င်
ဖားကန့်တွင် မြေစာပုံပြိုကျမှုကြောင့် ရေမဆေးရှာသူနှစ်ဦး ဒဏ်ရာရရှိ၊ နှစ်ဦးပျောက်ဆုံး
သမိုင်းဝင် ရဲဘော်သုံးကျိပ်ပန်းခြံ ပြန်လည်ရရှိရေး ကမာရွတ်စည်ပင်ရုံးရှေ့တွင် တစ်ကိုယ်တော် ?
မကွေး တိုင်းဒေသကြီး စည်ပင်သာယာရေး ဥပဒေကို ဒီမိုကရေစီ ပိုကျအောင် ပြင်ဆင်နေကြောင်း တိုင်းဒေ??